SENDONG « MMWeather Information BLOG
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း WASHI(27W) ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ
By mmweather.ygn, on December 20th, 2011%
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် အားလျော့သွားသည့် WASHI(27W) သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး အနောက်မြောက်ဘက်(ဗီယက်နန်ကမ်းခြေသို့) ဦးတည်ရွေ့လျားကာ ဟိုချီမင်းစီးတီး အနောက်ဘက် ၂၇၅ မိုင်ခန့်အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
TSR မှ တင်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် NRL data များအရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ အချိန်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းအားပျော့ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း WASHI(27W) တည်ရှိမည့် နေရာပြပုံ အပေါ်နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် ရွေ့လျားရောက်ရှိမည့် နေရာ . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း WASHI(27W) ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း WASHI(27W) – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်သွားပြီ
By mmweather.ygn, on December 19th, 2011%
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI သည် မူလခန့်မှန်းသည့် အတိုင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားကာ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးလာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ခြောက်သွေ့အေးမြသည့် အရှေ့ မြောက် လေစီးကြောင်းများကြောင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် လုံးဝ အားပျော့ပျက်ပြယ်သွားတော့မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်မရောက်မီ မြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ် ကွေ့ပြီး လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ပါသည်။
27W WASHI – 19 Dec 2011 0600Z Location: 9.7 111.9 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 . . . → Read More: မုန်တိုင်း WASHI(27W) – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်သွားပြီ
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့သို့ ဦးတည်
By mmweather.ygn, on December 18th, 2011%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI(27W – ဖိလစ်ပိုင်အမည် SENDONG) သည် အနောက်တောင်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၅၄၀ မိုင်ခန့်သို့ ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေပါသည်။
မုန်တိုင်း WASHI သည် စင်္ကာပူ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၉၄၅ မိုင်ခန့်၊ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့တော် အရှေ့မြောက်ဘက် ၉၉၅ မိုင်ခန့်မှ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၄ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါသည်။ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၅၅ မိုင်မှ ၇၅ မိုင်နှုန်းအထိရှိနေပြီး၊အရှေ့မြောက်မုတ်သုန်လေစီးကြောင်း၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် လာမည့် ၇၂ နာရီ အတွင်း တဖြည်းဖြည်း အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
သို့ရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့သို့ ဦးတည်
2 comments Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ဝင်ရောက်လာသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI
တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI(27W ဖိလစ်ပိုင်အမည် SENDONG) သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီ တွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၂၆ မိုင်နှုန်းဖြင့် လျှင်မြန်စွာ ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး Spratly ကျွန်းအပေါ်မှ ဖြတ်သန်းကာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး အနောက်ဘက် ၆၂၅ မိုင်ခန့်သို့ ရောက်ရှိ ဗဟိုပြုနေပါသည်။
မုန်တိုင်း WASHI ၏ အရွယ်အစား(အချင်း ကီလိုမီတာ ၅၀၀) နှင့် အင်အား(Tropical Storm)တို့ ပြောင်းလဲမှု မရှိသော်လည်း မူလခန့်မှန်းထားသည့် လမ်းကြောင်း တောင်ဘက်သို့ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လာမည့် ၄၈ . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ဝင်ရောက်လာသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI
Leaveacomment Uncategorized အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI – ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ PALAWAN ကျွန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on December 17th, 2011%
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအားဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးနောက် ဖိလစ်ပိုင် အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ SULU ပင်လယ်သို့ ဆင်းသက်ပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ PALAWAN ကျွန်းအား ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနမှလည်း Palawan ကျွန်းမှ Puerto Princesa မြို့အား ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် ညတွင် မုန်တိုင်းဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Tropical Storm WASHI (SENDONG) heading westward across Sulu Sea…expected to cross Central Palawan early tomorrow morning. Heavy rains & strong winds to reach Palawan, particularly Puerto Princesa tonight.
TSR မှလည်း Puerto . . . → Read More: အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI – ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ PALAWAN ကျွန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ
3 comments Uncategorized အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI(27W)
By mmweather.ygn, on December 16th, 2011%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI(27W -ဖိလစ်ပိုင်အမည် SENDONG) ၏ မုန်တိုင်း ဗဟိုသည် ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေမှ မိုင် ၂၀ ခန့်သာ ကွာဝေးသည့် နေရာ၌ ရောက်ရှိနေပြီး မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်းမှာ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ မိုင် ၅၀ မှ ၆၅ မိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေပြီး၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်း အမြင့် (မုန်တိုင်း ဗဟိုတွင်) ၁၇ ပေအထိရှိကြောင်း သိရပါသည်။
မုန်တိုင်းအရွယ်အစားမှာ အချင်း ၅၀၀ ကီလိုမီတာ(၃၁၀.၆၉ မိုင်ခန့်) ရှိနေပါသည်၊ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂နာရီခွဲ အချိန်ရရှိသည့် NRL data များအရ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ . . . → Read More: အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI(27W)
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း 27W(ဖိလစ်ပိုင်အမည် SENDONG) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် WASHI ဟု ပေးလိုက်ပြီ
By mmweather.ygn, on December 15th, 2011%
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၂နာရီခွဲတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 27W (ဖိလစ်ပိုင်အမည် SENDONG) သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အနီးဆုံးကမ်းခြေမှ မိုင် ၃၉၅ ကျော်ခန့်ကွာဝေးသည့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိဗဟိုပြုလျှက်ရှိပြီး မြို့တော်မနီလာ၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၉၀၄ မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိနေပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၅ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး ဗဟိုဖိအား 996 hPa သို့ ပြန်လည်ကျဆင်းလာကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟိုရှိလေတိုက်နှုန်းမှာလည်း တစ်နာရီ ၃၅ နော်တီကယ်မိုင်အထိ ရှိလာကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
27W အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည် WASHI ဟု ဂျပန်ဘာသာဖြင့် . . . → Read More: မုန်တိုင်း 27W(ဖိလစ်ပိုင်အမည် SENDONG) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် WASHI ဟု ပေးလိုက်ပြီ
3 comments Uncategorized အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 27W(TWENTYSEVEN) ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီ
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 27W (ဖိလစ်ပိုင်အမည် SENDONG) သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
လတ်တလောရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ Palau ကျွန်းအားတည့်တည့် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် မုန်တိုင်း 27W သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အနီးဆုံးကမ်းခြေမှ မိုင် ၅၂ဝ ကျော်ခန့်ကွာဝေးသည့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။
27W TWENTYSEVEN – 15 Dec 2011 0000Z Location: 7.2 134.3 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 . . . → Read More: အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 27W(TWENTYSEVEN) ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီ
2 comments Uncategorized ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ 27W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာပြီ
By mmweather.ygn, on December 14th, 2011%
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ရှိ) Palau ကျွန်း အရှေ့၃၁၅ မိုင်ခန့်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 27W(TWENTYSEVEN) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနမှ SENDONG ဟု အမည်ပေးထားပြီဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီ ရရှိသည့် NRL data များအရ ဖိလစ်ပိုင်မြို့တော် မနီလာ၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၃၄၀ ကျော်ဝေးကွာသည့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၈ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
27W TWENTYSEVE – 14 Dec 2011 0600Z Location: . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ 27W မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာပြီ
Leaveacomment Uncategorized Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum